मूत्रनलीमा आएको फोहोर के होला ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
मूत्रनलीमा आएको फोहोर के होला ?
प्रश्न : मैले गर्लफ्रेन्डसँग यौनसम्बन्ध राखेको पाँच वर्षजति भयो । अहिले आएर ममा एउटा समस्या देखा पर्‍यो । मेरो मूत्रनलीबाट सेतो फोहोर आउँछ, जुन गन्हाउँछ पनि । के यो एचआईभीको लक्षण हो?
युवावस्थामा यौनेच्छा तीव्र हुन्छ नै, त्यसैले आफ्नो यौनचाहना शान्त पार्ने कार्यमा युवाहरू प्रयासरत रहन्छन् । विवाहको समय पछिल्तिर धकेलिएको स्थितिमा यौनसम्पर्क राख्ने चाहना पूरा गर्न प्रेमिका भएका व्यक्तिले त्यसैलाई उत्तम विकल्प मान्छन् । तपाईंको स्थितिमा पनि यस्तै भएको देखिन्छ, तर तपाईंको सन्देशमा यौनसम्पर्कको घटना एउटा मात्र थियो कि पाँच वर्षदेखि निरन्तर सम्पर्क राख्दै आउनुभएको छ, स्पष्ट छैन ।
सहमतिमै भएका यौनसम्पर्कका पनि समस्या हुन्छन्, त्यसैले जोसमा होस गुमाउनु हुँदैन । असुरक्षित सम्बन्धबाट अनिच्छित गर्भ वा यौनरोगको समस्या भोग्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ । यी कुनै नभएको स्थितिमा पनि सम्बन्धको स्थायित्व नहुँदा वा त्यसले निरन्तरता नपाउँदा त्यसका आफ्नै समस्या हुन्छन् । यस्ता समस्या शारीरिक तथा मानसिक दुवै हुन सक्छन् ।
तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले पुरुष यौनाङ्गका बारेमा छोटो चर्चा गरौं । तपार्इंलाई थाहै होला, प्रमुख पुरुष यौनाङ्ग लिङ्ग, अण्डकोष थैली, अण्डकोष तथा पौरुष ग्रन्थि हुन् । त्यसबाहेक इपिडिडाइमिस, वीर्यथैलीजस्ता अङ्गले यी यौनाङ्गका साथै प्रजनन कार्यमा सहयोग गर्छन् । लिङ्ग मुख्यतया तीनवटा स्पन्जजस्तो संरचनाले बनेको हुन्छ । लिङ्गको माथिल्लो भागमा दुईवटा Corpus Cavernosa (कर्पस क्याभरनोसा) भनिने भाग हुन्छन् भने तलतिर एक Corpus Spongiosum (कर्पस स्पञ्जिओसम) । यसलाई tunica albuginea भनिने बलियोfibrous tissue ले घेरेको हुन्छ । उत्तेजित हुँदा लिङ्गका धमनीहरूबाट बढी मात्रामा रगत यिनै संरचनामा जम्मा हुन थाल्छ, साथै लिङ्गबाट रगत बाहिर निस्कने क्रम घट्छ अनि लिङ्ग कडा, मोटो अनि लामो हुन्छ । यसलाई नै हामी लिङ्ग उत्तेजित भएको भन्छौ ।
यही लिङ्गको भित्र एउटा नली हुन्छ जसलाई हामी मूत्रनली भन्छौं । यो नली लिङ्ग मूण्डमा एउटा प्वालका रूपमा खुल्छ, जसलाई हामी मूत्रद्वार भन्छौं । यसले पिसाब थैलीबाट पिसाबलाई वाहिर निस्कन बाटो दिने भएकाले पनि यसलाई मूत्रनली भनिएको हो, तर यही नलीबाटै वीर्य पनि निस्कन्छ । तपाईंको यही मूत्रनलीबाट फोहर आएको हो भन्ने मानेर जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । मूत्रनलीबाट पिसाब अनि वीर्य निस्कनु सामान्य हो । यौन उत्तेजना हुँदा थोरै रस पनि निस्कन सक्छ । त्यसबाहेक गन्हाउने किसिमको सेतो पदार्थ वा पीप वा अन्य केही आउनुले मूत्रलनीको शोथ वा संक्रमणको संकेत गर्छ । यस्तो असामान्य मूत्रनली श्राव प्रोस्टेट ग्रन्थिको संक्रमण वा मूत्रप्रणालीको खराबीमा पनि देखा पर्छ ।
मूत्रनलीको संक्रमण गोनोरिया वा क्लामाडियाजस्ता सूक्ष्म जीवले गराउँछन् । लक्षणको कुरा गर्दा मूत्रद्वारबाट पीप आउने वा पिसाब फेर्दा दुख्ने वा पोल्ने हुन सक्छ । लक्षणहरू तुरुन्तै देखा पर्न पनि सक्छन् भने कहिलेकाहीं त हप्तौं वा महिनौं पनि लाग्न सक्छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कतिपय परिस्थितिमा यसको लक्षण नै नदेखिन सक्छ । त्यसैगरी मूत्र प्रणालीको संक्रमण हुँदा पिसाब पोल्ने, पिसाब चाँडो–चाँडो लाग्ने, पिसाब थोरै आए पनि छिन–छिनमा पिसाब गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ । यस्तो संक्रमण मृगौलातिर फैलिए ढाडको तल्लो भागको दायाँ वा बायाँ दुख्न सक्छ ।
तपाईंले यौनसम्पर्क गर्दा कन्डम प्रयोग गर्नुभएको छ भने यस्ता संक्रमण सर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
के यो एचआईभीको लक्षण होला ?
Human Immuno-deficiency Virus (HIV) एक विषाणु (भाइरस) हो, जुन नामबाटै पनि स्पष्ट छ । यही एचआईभीको संक्रमण भएपछि बिस्तारै व्यक्तिको प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर भएर विभिन्न रोग जीवाणुका संक्रमण पछि त्यसै अनुसारका विभिन्न लक्षण देखिएको अवस्था एड्स (ब्क्ष्म्क्) हो । शरीरमा एचआईभी भए पनि एड्सको लक्षण देखिइनसकेको अवस्थालाई एचआईभी अवस्था भनिन्छ । त्यसैले एचआईभी भन्नु र एड्स भन्नु एउटै कुरा होइन । यस अर्थमा एचआईभीको लक्षण भन्नु मनासिब नहोला । एचआईभी भएका व्यक्तिलाई हामी रोगी शब्द प्रयोग गर्दैनौं ।
एचआईभीको संक्रमण हुनासाथ हल्का फ्लुजस्तो लक्षण देखा पर्न सक्छ, तर कतिपयले त्यस्तो लक्षण थाहा नपाउन सक्छन् । एचआईभी शरीरमा भए पनि वर्षौंसम्म कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ । एचआईभीको संक्रमण भएर प्रतिरक्षा शक्ति क्षीण हुँदै गएपछि विभिन्न रोग लागेर त्यसैअनुसारका लक्षण देखिएको अवस्था नै एड्स हो । सामान्यतया देखिने लक्षण ज्वरो आउनु, पखाला लाग्नु, वजन घट्नु तथा कुपोषणका लक्षणहरू देखिनु, छालाका विभिन्न समस्या आउनु, मुख तथा घाँटीमा काई (सेतो), हर्पिस आउनु, दाँत वा गिजाका समस्याहरू, खोकी वा स्वास फेर्न गाह्रो हुनु, चाँडै थकाइ लाग्नु वा कमजोरी हुनु आदि हुन् । याद गर्नुपर्ने कुरा के भने यी लक्षणहरू अन्य कतिपय रोग हुँदा पनि देखिन्छन् । पीप आउनुले यौनरोग वा अन्य त्यस्तै संक्रमण भएको संकेत गर्छ ।
तपाईंको मनमा कहिले लक्षण देखिएलान् भनेर लाग्न सक्छ । एचआईभीको सन्दर्भमा भने एड्सको स्थितिमा नपुगेसम्म सामान्य खासै लक्षण देखिन गाह्रो छ र त्यसका लागि दसौं वर्ष वा बढी समय पनि लाग्न सक्छ । कतिपयलाई त त्यसभन्दा बढी समयमा पनि एड्सको लक्षण नदेखिएको अवस्था छ । एचआईभी शरीरमा भए–नभएको यकिन गर्न एचआईभीसँग सम्बन्धित प्रतिजैविकी परीक्षण गरिन्छ । यस्ता रक्त परीक्षणमा नतिजा नकारात्मक (नेगेटिभ) हुनुले एचआईभी तपाईंको शरीरमा नभएको जनाउँछ भने सकारात्मक (पोजिटिभ) हुनुले भएको । यद्यपि यो परीक्षणभन्दा पहिले चिकित्सकीय परामर्श लिनु आवश्यक छ ।